Falanqaynta Farsamada ee Ganacsatada Bilowga ah | vfxAlert official blog
Falanqaynta farsamada ee dadka cusub
Falanqaynta farsamada ayaa ah qaab baahsan oo sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee saadaalinta dhaqdhaqaaqyada hantida maaliyadeed ee kala duwan (saamiyada, lamaanaha lacagta, ikhtiyaarrada laba-geesoodka ah). Tani waa beddelka falanqaynta aasaasiga ah ee baareysa xaaladda dhaqaale iyo siyaasadeed, xogta tirakoobka, dareenka suuqa, iyo xanta. Si ka duwan qaabkii hore halkan kaliya algorithms xisaabeed ee qiimeynta xogta taariikhiga ah ayaa halkan looga faa'iideysan karaa.
Boostooyinka aasaasiga ah waxaa abuuray Charles Dow waxayna ku soo baxeen maqaallo dhowr ah oo ku yaal Wall Street Journal 1900-1902. Qoraagu wuxuu adeegsaday macluumaad taariikhi ah oo ku saabsan suuqa saamiyada, si kastaba ha noqotee, aragtidan waxay siisaa faa'iido deggan sidoo kale Forex iyo calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah. Waa kuwan mabaadi'da aasaasiga ah:
Qiimaha ayaa ku lug leh wax walba . Qiimaha hadda jira iyo suuqa, dhaqdhaqaaqa horeyba wuxuu u tixgeliyey dhammaan isbeddellada, niyadda kaqeybgalayaasha, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara sameynta qiimaha hadda jira. Ma isticmaali kartid falanqaynta aasaasiga ah. Oraahda hadda jirta, dhaqdhaqaaqyadu waxay durbaba tixgeliyeen dhammaan u janjeera, niyadda ciyaartoyda suuqa, iyo sidoo kale dhinacyo kale oo beddeli kara horumarka sicirka jira. Uma baahnid inaad dalbato falanqaynta aasaasiga ah.
Taariikhda ayaa soo noqnoqota . Xogta tirakoobka Dow waxay muujineysaa u janjeersiga suuqa, gaar ahaan beddelka culeyska (kor) iyo qulqulatooyinka (hoosta), waa kuwo xasilloon oo soo noqnoqda xoogaa. Hantidan waxaa loogu adeegsaday algorithms xisaabeed tilmaamayaasha farsamada.
Jaangooyooyinka qiimaha ayaa si isdaba joog ah u jira oo midba midka kale kaabaya. Qiimuhu si aan kala sooc lahayn uma dhaqaaqo oo daqiiqad kasta waxaa jira dhaqdhaqaaq aad ugu habboon: kor, hoos, ama dhinacyada kala duwan: kor, hoos, ama dhinac. Sidoo kale, mid ayaa loo aqoonsan karaa inuu yahay "mid lagu daray" dareenno kale:
Aasaasiga ah Waa kuwan muddada-dheer (laga bilaabo sannad ama in ka badan) u janjeera, kuwaas oo u furaya heshiisyo ciyaartoy waaweyn iyo lacagaha gacanta.
Secondary (bil ilaa lix bilood) . Waxay muujineysaa dib-u-celin iyo saxitaanno isbeddel dheer ah. Waa kuwan inta badan ciyaartoyda suuqa.
Yar . Dhaqdhaqaaqa qiimaha badan ee dhaqaaqa badan, laga bilaabo dhowr daqiiqo illaa dhowr saacadood. Sababta ayaa badanaa ah daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo xogta tirakoobka, laakiin falanqaynta farsamadu tan ma khuseyso. Inta lagu jiro xilliyadan, dab-baareyaasha, calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, ganacsatada maalin-ka-soo-baxa, iyo HFT algorithms ayaa aad u shaqeeya.
Dow Aragtida sheegayaa in la joogo wax kasta oo la siiyey, dhaqdhaqaaqa jiho laga heli karaa qalab ganacsi ah. Si kastaba ha noqotee, suuqa dhabta ah wuxuu diidayaa mabda'a iyo waqtiga intiisa badan (illaa 70%) waloow uu ku jiro baaxad weyn, laakiin wali baaxad ahaan. Qiimaynta falanqaynta muddada-dhexe iyo muddada-dheer ayaa sii jiri doonta .
Qodobbada muhiimka ah ee falanqaynta farsamada:
Jaanqaad ama isbeddelkiisa ayaa loo baahan yahay in lagu caddeeyo mugga. Khubarada ayaa muddo dheer ka wada hadlay waxa mugga suuqa uu qeexayo saxnaanta saadaasha dheer. Gaar ahaan suuqa Forex halkaas oo aysan jirin wax xog ah oo ku saabsan mugga lacageed ee macaamil ganacsi furan, hase yeeshe, qaanuunka ayaa shaqeynaya - mugyadu waa inay kordhiyaan labadaba koritaanka iyo hoos u dhaca suuqa. Waxaan kaliya u haynaa istiraatiijiyad muddo-gaaban ah oo ku saabsan ikhtiyaariyada laba-geesoodka ah haddii aysan sidaas ahayn.
Jaanqaadku wuu sii socdaa illaa ay ka muuqato calaamadda dib u noqoshada. Kani waa mid ka mid ah sharciyada ugu muhiimsan - hubi inaad sugto dib u noqosho markaad furayso booska ka soo horjeedka ama aad xireyso midka hadda jira.
Noocyada hababka falanqaynta farsamada
Hababka saadaashu waxay noqon karaan xisaab iyo jaantus. Imtixaanka garaafka wuxuu dhisayaa qaab xariiqyo gaar ah:
Khadadka isbeddelka ee muujinaya xawaaraha iyo jihada hadda jirta (marka loo eego xagalkooda xagjirnimada) ee dhaqdhaqaaqa qiimaha hadda jira;
Taageero iyo iska caabin , oo dejiya xaddidaadaha dhinaca ayaa lagu qeexaa iyo heerarka qiimaha si isdaba joog ah looga riixo. Habdhaqankan qiimaha waxaa lagu arki karaa ugu badnaan max / min (usbuuc, bil) ama meelaha ay ka jiraan amarro badan oo waaweyn oo sugaya. Ka furitaanka burburka heerarkan oo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho faa'iido weyn;
Sii wadida ama isbedelka qaababka. Tilmaamaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah wuxuu dalbanayaa xaqiijinta qasabka ah ee qaababka dib u noqoshada falanqaynta laambadda, in kasta oo aadan ku dabaqi karin inta lagu gudajiro nidaamka ganacsiga.
Qaababka xisaabta waxay ku saleysan yihiin baaritaanka xogta taariikheed, maaddaama tirakoobka "qiimaha wax walba xisaabta lagu darsado" ay soo jeedinayso. Tilmaamayaasha farsamadu waxay muujinayaan isbeddellada sicirka: u janjeera, halka ay suuqu ka socdaan, oscillators, sida dhaqdhaqaaqyadani u dhacaan .
Noocyada garaafyada qiimaha
Ganacsade ayaa dooran kara xulashooyin dhowr ah si uu u muujiyo xigashooyinka qiimaha:
Sax Sicir barar kasta (shil) waxaa loo muujiyaa si ka duwan garaafyada kale, shilintu ma keento waqtiga iyo inta sicirka uu isbedelayo - dhibic cusub ayaa soo baxda kaliya shilinta cusub ka dib. Garaafyada saxanka kuma habboona wax ku iibsiga gacanta. Kaliya tijaabinta kalkaaliyayaasha khabiirka otomaatiga ah iyo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah, halkaasoo ay ku bixiyaan xog dheeri ah oo sax ah marka la barbardhigo waqtiga daqiiqadda.
Khad . Horeyba waxaa ujiray qiime iyo waqtiga isbedelka sicirka, laakiin sida shilinta way adagtahay in lakala ogaado inta uu le'egyahay isbedelkiisa, la'aanteed baaritaanka muuqaalka uusan macquul aheyn;
Column (bar). Jaantuska ugu weyn ee is-weydaarsiga saamiyada ka hor inta aan la faafin nalka shumaca wuxuu adeegsadaa afar qiime oo waaweyn: furan, dhow, sare, iyo hooseeya. Lagu bixiyo dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah;
Shumacyo Waxaa laga sameeyay in ka badan laba qarni ka hor Jabbaan iyada oo ah hab isku filan. Sida baarka oo kale, waxay isticmaashaa afar nooc oo qiimayaal ah, laakiin si ficil ahaan loo muujiyey. Hadda jaantuska qiimaha ugu caansan dhammaan suuqyada maaliyadeed.
Marka lagu daro horay loo soo sheegay, jaantusyada kale waxay tixgelinayaan oo kaliya qiimaha: "tic-tac", Renko iyo Kagi. Iyadoo aan loo eegin macluumaadka ku saabsan adeegsigooda wax ku oolka ah, waxaa lagu bixiyaa oo keliya qaab tilmaamayaal dheeri ah, oo inta badan laga isticmaalo gobolka Koonfurta Aasiya.
Falanqaynta Gaarka ah iyo Xeeladaha Ganacsi
Falanqaynta ganacsiga iyo falanqaynta suuqa, isku xirka tilmaamayaasha farsamada ayaa loo adeegsadaa inay bixiyaan calaamado ku saabsan furitaanka / xiritaanka macaamil ganacsi. Xeerka ugu weyn ee xeeladaha oo dhan: waligaa ha u adeegsan kaliya hal qalab amar ganacsi, xaqiijinta kuwa kale waa lagama maarmaan. Halkan waxaa ah tusaale wanaagsan oo ku saabsan istaraatiijiyad fudud oo ku saabsan laba tilmaamood: isbeddel Dhaqdhaqaaqa Celceliska iyo RSI oscillator.
Waxaan hubinay in mabaadi'da ugu muhiimsan ay si fiican u shaqeeyaan oo aan u oggolaanno iyaga in lagu dabaqo si loo sameeyo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ah leh oo ay u caddahay ganacsatada khibradda leh iyo kuwa cusub. Waxaa ka mid ah:
Elliott aragtidiisa mawjadaha , oo xaqiijinaya mabda'a sicirka sicirka sicirka. Aragtida guud ahaanteed waxay ku adagtahay cusub, laakiin waxaa jira fasiraado ka fudud sida hirarka Wolf.
Elliott wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee muujiya jiritaanka siddeed wareeg oo wareegga suuqa ah oo ku saabsan hanti kasta oo ganacsi: shan hirar ayaa noqon doona lama huraanka (isbeddellada), saddex waa sax. Qaabka ayaa ku soo noqnoqonaya dhammaan waqtiyada iyo, sida ay u socoto, waxay kuxirantahay lambarka Fibonacci.
Tirooyinka Fibonacci . Falanqaynta farsamada waxaa laga yaabaa inaysan soo bandhigin sii waditaan muuqda ama qaabab dib u noqosho; xitaa isbeddelku wuxuu noqon karaa arrin. Marwalba waxaa jira heerar sicir adag waana lagu aqoonsan karaa iyadoo la adeegsanayo nambarada Fibonacci. Xitaa dadka cusub ee codsanaya kaliya tilmaamahan waxay si sax ah u ogaan karaan goorta la furayo / xirayo macaamil ganacsi iyo halka ay jiraan taageero / iska caabin.
Markuu qiimaha ugu dhow yahay heerka, waxay u badan tahay inuu yahay dib-u-noqosho ama sii wadida u janjeedhka jihada burburka. Jaantusku wuxuu muujinayaa sida qiimaha uu ugu socdo khadadka Fibonacci .
Khadadka ka sokow waxaa loo isticmaali karaa marawaxado, muquunin, qaanso, iyo aagagga waqtiga Fibonacci. Qalabka waxaa lagu darayaa heerka caadiga ah ee dhammaan boosteejooyinka waaweyn ee ganacsiga, sida MetaTrader.
Farqiga qiimaha . Dhacdada, marka qiimaha furitaanka soo socda uu ka badan yahay ama ka hooseeyo qiimaha xiritaanka baarka hore, wuxuu ku badan yahay suuqa saamiyada. Laakiin Forex, farqiga waa xaalad caadi ah. Waxaan dhihi karnaa in nusqaamaha aysan aheyn sida saxda ah istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah maadaama sababta ay u muuqdaan ay tahay bangiyada iyo macaamillada iibsiga ka dib marka la xiro kalfadhiyada ganacsiga ugu waaweyn.
Tani waa run, laakiin isla mar ahaantaana, nusqaamaha ayaa xaqiijinaya xeerarka Dow - ku soo noqoshada suuqa qiimayaashii hore (nusqaamaha xirida) waxay muujineysaa in qiimaha uu tixgelinayo wax walba isla markaana lagu caddeeyay mugga suuqa.
Xaaladaha badankood, farqiga u dhow aag maran, oo kuu oggolaanaya inaad faa'iido hesho markii aadan heli karin saadaal sax ah oo ku saabsan tilmaamayaasha (waa isla xaalad marka macluumaad muhiim ah soo baxo marka falanqaynta farsamada iyo calaamadaha bilaashka ah ee bilaashka ah '' shaqeyn)
Talooyin ku saabsan isticmaalka
1. Waqtiga falanqaynta farsamo oo balaaran (dheer), ayaa saxeexaya calaamadaha iyo qaababka shaxda. Bilowgayaasha, gaar ahaan qaddar yar oo maaliyadeed, runti uma malaynayaan sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waxay bilaabaan inay ka ganacsadaan maqaarka iyagoo rajeynaya inay dhaqso lacag ku helaan. Istaraatiijiyaddani ma shaqeyneyso, macaamillada noocan oo kale ah waxay faa'iido u leeyihiin ganacsatada xirfadleyda ah ee la shaqeyn kara tirooyinka aan dhameystirneyn iyo heerarka taageerada / caabbinta qarsoon. Laakiin xitaa ka hor intaan la furin jagooyinka 5-10 daqiiqo, waxay baaraan xaaladdii 4-6 saac ee la soo dhaafay.
2. Ganacsi heer ahaan:
Dhaqdhaqaaqa qiimaha dheer ee u dhow heerka ugu yaraan laba taabasho (dib-u-eegis) ayaa loogu magac daray isku-darka. Dib-u-soo-celinta badan, ayaa sare u qaadeysa kalsoonida isbeddel cusub;
Taageerada / iska caabintu sidoo kale waa xoojin. Si loo aqoonsado, 2-3 ee qiimaha ugu dambeeya ee sareeya / ugu yar ayaa loo baahan yahay. Ka taxaddar markaad si xoogan wax u iibsaneyso - ha u raadin heer uusan ahayn!
Beddelidda taageerada isbeddelka / iska caabbinta waa la rogay.
3. Kalsoonida isbeddelka waxaa lagu qeexaa inta ay le'eg tahay iyo tirada taabashada ee marinka marinka;
4. Xawaaraha dhaqdhaqaaqa sicirka waxaa lagu qeexay xagalka khadadka isbeddelka ama Celceliska Dhaqdhaqaaqa (eeg tusaalaha istiraatiijiyadda);
5. Kuwa bilowga ah inta lagu gudajiro dhaqdhaqaaqa dambe, waxaa caqli badan in laga fogaado ka ganacsiga xuduudaha kanaalka, gaar ahaan ciriiri. Way fiicantahay in la sugo burburka ka dibna la galo isbedelka;
6. Qiimaha kiisaska badankood hoos ayuu u dhacaa oo wuu ka gaagaaban yahay waqtiga ay kor u kacayaan.
Si dib loogu bilaabo waxaan ku xasuusinaynaa in falanqaynta farsamada iyo dhamaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay ka shaqeeyaan xogta taariikhiga ah - ma jiraan istiraatiijiyad kale oo lagu saadaaliyo dhaqdhaqaaqa suuqa! Laakiin falanqaynta macluumaadka hore waxay keeneysaa dib u dhac ku yimaada tilmaamayaasha la xiriira suuqa hadda jira, sidaas darteed calaamadaha binary ayaa laga yaabaa inay soo baxaan marka waqtiga ugu habboon ee lagu furayo ikhtiyaarka uu horay u dhammaaday. Suurtagal maaha in gebi ahaanba laga takhaluso dib u dhaca; markasta xaqiiji astaamaha oscillators iyo tilmaamayaasha leh qaababka muuqaalka.